Praluent vs Repatha: အဓိကကွာခြားချက်များနှင့်တူညီချက်များ - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | ဇွန်လ 2022
ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီသတင်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေး ဆီးဂိမ်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုန်ပစ္စည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Praluent vs Repatha: အဓိကကွာခြားချက်များနှင့်တူညီချက်များ
Praluent နှင့် Repatha သည် LDL-cholesterol (LDL-C) ကို hypercholesterolemia နှင့်မြင့်မားသောကိုလက်စထရောကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောထိုးဆေးများဖြစ်သည်။ မူးယစ်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည်သွေးမှ LDL-C ဖယ်ထုတ်ရန်အသည်းစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သော PCSK9 inhibitors အဖြစ်ခွဲခြားထားသည် ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အတော်လေးစျေးကြီးသောဆေးများဖြစ်သည်။
Praluent (Praluent ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း) alirocumab အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ heterozygous မိသားစု hypercholesterolemia (HeFH) နှင့်လက်တွေ့ atherosclerotic နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကုသရန် FDA ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကိုအစားအသောက်နှင့်ပါးစပ်အနေဖြင့်အသုံးပြုသော statin ကုထုံးအပြင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
Praluent ကို ၂ ပတ်တစ်ကြိမ် 75 mg / mL သို့မဟုတ် 150 mg / mL ဆေးထိုးအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကြိုတင်ဖြည့်ထားသောဘောပင်သို့မဟုတ်ဆေးထိုးပြွတ်တစ်ခုအဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ အမြင့်ဆုံးသောက်သုံးမှုသည် ၂ ပတ်တစ်ကြိမ် 150 mg / mL ထိုးဖြစ်သည်။ ဆန္ဒရှိလျှင်သင်၏ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ပေါ် မူတည်၍ တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်သောက်နိုင်သည်။
Praluent စျေးနှုန်းသတိပေးချက်များအတွက် sign up လုပ်ပါနှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသည့်အခါထွက်ရှာ!
Repatha (Repatha ဆိုတာဘာလဲ?) ကို၎င်း၏ generic အမည်, evolocumab အားဖြင့်လူသိများသည်။ ၎င်းသည်လူသိများသောနှလုံးရောဂါရှိသူများတွင်နှလုံးရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းအန္တရာယ်လျှော့ချရန်အသုံးပြုသည်။ Praluent ကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်အရွယ်ရောက်သူများကို HeFH နှင့်လည်းဆက်ဆံနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပိုမိုပြင်းထန်သောကိုလက်စထရော၏ပုံစံဖြစ်သော homozygous familial hypercholesterolemia (HoFH) ရှိသူများရှိ LDL ကိုလက်စထရောကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်။ Praluent နှင့်မတူဘဲအချို့သောအခြေအနေများတွင်ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Repatha ကို ၂ ပတ်သို့မဟုတ်တစ်လလျှင် 140 mg / mL ဆေးထိုးပေးသည်။ Repatha ကိုကြိုတင်ဖြည့်ထားသောဆေးထိုးအပ်၊ SureClick autoinjector pen နှင့်တစ်ခုတည်းအသုံးပြုသော Pushtronex infusor စနစ်များအဖြစ်ရရှိနိုင်သည်။ Infusor စနစ်တွင် ၉ မိနစ်ကျော်ကြာအောင်စီမံနိုင်သော ၄၂၀ မီလီဂရမ် / ၃.၅ mL ဖြေရှင်းချက်ရှိသည်။ အချို့လူများက၎င်းကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းကြောင့် Pushtronex ကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။
Repatha စျေးနှုန်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်များကို sign up လုပ်ပါနှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသည့်အခါထွက်ရှာ!
Praluent vs Repatha ဘေးထွက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် Side
Praluent နှင့် Repatha သည်တူညီသောအသုံးပြုမှုနှင့်အလွန်ဆင်တူသောဆေးများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏တူညီချက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုအောက်တွင်ဆက်လက်လေ့လာနိုင်သည်။
အမြင့်ဆုံးထိုး statin ကုထုံးနှင့်အတူ Heterozygous မိသားစု hypercholesterolemia (HeFH)
အများဆုံးထိုး statin ကုထုံးနှင့်အတူပေါင်းစပ် atherosclerotic နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါအတွက် lipid လျှော့ချ
myocardial infarction, လေဖြတ်ခြင်းနှင့် coronary revascularization ၏ကာကွယ်တားဆီးရေး
Heterozygous မိသားစု hypercholesterolemia (HeFH) တစ်ခုတည်းဒါမှမဟုတ်အများဆုံးဆေး statin ကုထုံးနဲ့ပေါင်းစပ်
အများဆုံးဆေး statin ကုထုံးနှင့်အတူ Homozygous မိသားစု hypercholesterolemia (HoFH)
Injection site ကိုတုံ့ပြန်မှု
အရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးခြင်း (ကြိုတင်ဖြည့်ထားသောဘောပင်၊ ကြိုတင်ဖြည့်ထားသောဆေးထိုးအပ်) အတွက်ဖြေရှင်းချက်
အရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးခြင်း (ကြိုတင်ဖြည့်ထားသောဆေးထိုးခြင်း၊ SureClick autoinjector၊ Pushtronex system)
$ 671 (၁၄၀ mg / ml ထိုးနှုန်း)
$ 1,346 (၂ နှုန်းလျှင် ၁ mL Praluent ဘောပင်)
အဘယ်သူမျှမသိသာမူးယစ်ဆေးဝါး interaction ကအစီရင်ခံခဲ့သည်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသောသို့မဟုတ်မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသောအမျိုးသမီးများအတွက်စွန့်စားရမှုပြသရန်လုံလောက်သောအချက်အလက်မရှိပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သို့မဟုတ်နို့တိုက်နေစဉ် Praluent သောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသောသို့မဟုတ်မိခင်နို့တိုက်ကျွေးသောအမျိုးသမီးများအတွက်စွန့်စားရမှုပြသရန်လုံလောက်သောအချက်အလက်မရှိပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သို့မဟုတ်နို့တိုက်နေစဉ် Repatha သောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ
Repatha နှင့် Praluent တို့သည် LDL ကိုလက်စထရောကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည့် PCSK9 inhibitors နှစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးမြင့်မားသောကိုလက်စထရောကိုကုသရာတွင်ထိရောက်သောဖြစ်သော်လည်း, သူတို့ကအစဉ်အလာ statin ကုထုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်စျေးကြီးတယ်။
Praluent ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချရန် statin ကုထုံးနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အကြံပြုသည်။ Repatha သည်ကိုလက်စထရောကိုမြင့်မားစွာကုသရန်တစ်ကိုယ်တည်းသုံးနိုင်သည်။ Repatha သည် HeFH နှင့် HoFH အပြင်နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကိုလည်းလျှော့ချနိုင်သည်။
ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို ၂ ပတ်သို့မဟုတ်တစ်လလျှင်နှစ်ကြိမ်သောက်နိုင်သည်။ သို့သော် Repatha တွင်ဆေးထိုးရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Praluent နှင့် Repatha ကိုကြိုတင်ဖြည့်ထားသောဆေးထိုးအပ်နှင့်ဘောပင်များတွင်ရရှိနိုင်သည်။ သို့သော် Repatha ကိုတိုက်ရိုက်ဆေးထိုးခြင်းကိုမနှစ်သက်သောသူတစ် ဦး အတွက်အကျိုးရှိစေမည့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သည့်စနစ်ဖြင့်လည်းအုပ်ချုပ်နိုင်သည်။
ဤဆေးဝါးများကိုများသောအားဖြင့်သူတို့၏စျေးနှုန်းမြင့်မားသောကြောင့်နောက်ဆုံးဆေးခန်းအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်အချို့သောရောဂါများတွင်ကိုလက်စထရောကိုလျှော့ချရန်နှင့်သေဆုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်၎င်းတို့သည်အသုံးဝင်ဆဲဖြစ်သည်။ သို့တိုင်၊ ဤဆေးဝါးများနှင့်သင်၏ကုသမှုနည်းလမ်းအားလုံးကိုဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးရန်အကြံပြုပါသည်။
အချိန်ဇယားတိုင်းအတွက် HIIT လေ့ကျင့်ခန်း
အမျိုးသားများတွင် yeast ကူးစက်မှုကိုမည်သို့ကုသရမည်နည်း
ibuprofen နှင့် tylenol ကိုသင်မည်မျှကွာခြားနိုင်သနည်း